ကျွန်ုပ်တို့၏ Streaming Fix ကိုရယူခြင်း - Buffer မှ Hyper-Streaming | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 IBC ပြရန် » အဆိုပါ Buffer အတိတ်က Hyper-လွှ: ကျွန်ုပ်တို့၏လွှ Fix ရယူခြင်း
4K (UHD) နှင့်မြင့်မားသော dynamic range ကို (HDR) ကိုသာစတင်ကြောင်း - ဗွီဒီယို streaming များ၏အနာဂတ်ပတ်လည်စကားပြောဆိုမှုများ၏တာယနေ့အထိ, bandwidth ကိုကိစ္စရပ်များကိုလာမယ့်သောအိုင်ဒီယာအပေါ်ဗဟိုပြုထားသည်။ အစဉ်အဆက်တစ်လူစည်ကားဧရိယာ၌ Netflix နဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားမယ့်သူမည်သူမဆိုတစ်ဦးတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံသို့မဟုတ်အိပ်ဆောင်လိုပဲကလေဆိပ်များနားနေဆောင်ထဲမှာ, ဒါမှမဟုတ် high-သိပ်သည်းဆအိမ်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်င်ဖြစ်စေ, သိတယ်အဖြစ်သို့သော် - သူကတစ်ဦးဇာတ်လမ်းတွဲမှတဆင့်ရဖို့နီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး ကြားခံကြုံနေရမရှိဘဲသင်၏အကြိုက်ဆုံးပြပွဲ၏။
Cisco သည်အလိုအရ, 2018 အသုံးပြုပုံကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စားသုံးသူကိုအင်တာနက် traffic ကိုတစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 84 ရာခိုင်နှုန်းကိုဗီဒီယိုမှလာမယ့်ပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ကြီးမားသောခုန်အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်းမှာ, Netflix နဲ့တူသောအောင်းနေချိန်အထိခိုက်မခံ applications များ, အားဝင်ရောက်သည့်အခါစားသုံးသူကြားခံနှင့်အခြားကြားဖြတ်တွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်ဟုသူကမြင့်မားဖွယ်ရှိစေသည်။
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ပိုမိုကြီးမားသည့်ဒေတာအစီအစဉ်များ၏ပေါက်ကွဲသံသွားလာရင်းဗီဒီယိုကိုစီးဆင်းလိုသောလူများတစ်ခုမျာထည်းထည်းမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ တန်ဖိုးရှိသောကြည့်ရှုဆုံးရှုံးဖို့လို, မဝန်ဆောင်မှုပေး, အွန်လိုင်း streaming များန်ဆောင်မှုများစတင်နေဖြင့်တုန့်ပြန်သောအလှည့်အတွက်, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကွန်ယက်ကိုပိတ်ဆို့မှုကို ပို. ပင်ကိုဗီဒီယိုအသွားအလာမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်မပေးပါ။
ဥပမာအား Comcast, မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ကြေညာ တစ်ဦးသတင်းများအရအစာရှောင်ခြင်းစားသုံးသူ OTT linear အကြောင်းအရာအစုအဝေးကိုတိုက်ရိုက်ကြီးထွားလာနှင့်အတူဈေးကွက်ထဲမှာရှိပြီးသားသူသည်လောက်လွှဲတီဗီ join တံ့သောသူတို့၏အ streaming ဝန်ဆောင်မှု၏ပစ်လွှတ်။ ထိုမျှမကကြောင်းဝေးနောက်ကွယ်မှဖြစ်ကောလဟာလသတင်းများအရသူက Apple ကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးသားလွှမ်းမိုးဘရော့ဘန်း ပို. ပင်လူစည်ကားရဖို့အကြောင်းပါ။
အောက်ခြေလိုင်းကြည့်ရှုယခုခပ်သိမ်းသောကာလ, ရှိသမျှနေရာအပေါင်းတို့နှင့် devices တွေကိုဖြတ်ပြီး, အ smoothest streaming များအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအမြင့်မားဆုံးသောဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုမျှော်လင့်ထားသည်။
ကရိုးရှင်းတဲ့အဖြေကွန်ယက်ကိုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် bandwidth ကိုချဲ့ထွင်ရန်ကြောင်းထင်ရစေခြင်းငှါနေစဉ်, ဒီ 4K ဗီဒီယိုအကြီးအကျယ်ဖိုင်အရွယ်အစားပြီးသားဘာမျှမပြော, ထိုကဲ့သို့သော Netflix အဖြစ်ကြီးမားသောအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်ကူးစက်ခံရဖို့စတင်ပါပြီအထူးသဖြင့်အဖြစ်ပြုထက်ပိုမိုလွယ်ကူဟု လာမယ့်ကြောင်းမိုဘိုင်းအကြောင်းအရာပေါက်ကွဲမှု၏။
streaming များန်ဆောင်မှုတစ်ခုတိုးပွားလာအွန်လိုင်းလာအဖြစ်ကိုလည်း, ရွေးချယ်မှုများကြည့်ရှုသူတို့၏တီဗီကိုကြည့်အတွေ့အကြုံကိုကောက်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့အဘို့ကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်။ နယူးယှဉ်ပြိုင်မူရင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်သီးသန့်အကြောင်းအရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကုမ္ပဏီများကအတင်းအကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကြောင်းအရာတစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်မှာလာပါဘူး - ကိုအပ်ခံရဖို့လိုအပ်နေပိုပြီးဒေတာ။
ဗီဒီယိုဖိုင်များသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်အကြား, streaming များဝန်ဆောင်မှုများကိုယှဉ်ပြိုင်အတူတက်ထားရန်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုအသုံးပြုနေသည်။ ဒါကြောင့်မေးခွန်းသည်ယခု - ငါတို့သည်အဘယ်သို့တခုနှငျ့ညီညှတျ streaming များမှုနှုန်းမှာအသုံးပြုသူများသည်မျှော်လင့်ထား (နှင့်အဘို့အပေးဆောင်) မှလာသောအရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုကယ်နှုတ်တော်မူပါသနည်း
အဖြေ - မီဒီယာ optimization ။
Beamr ရဲ့မီဒီယာ optimization ဖြေရှင်းချက်မှတံခါးသော့ကိုမဆို H.264 များ၏ဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချနိုင်စွမ်း, H.265 (HEVC) သို့မဟုတ် JPEG, ၌တည်ရှိ၏ ထိုသို့သောအားဖြင့်လိုက်နာဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုဖိုင်သိုလှောင်မှုနဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်းစီး-စွမ်းရည်တိုးမြှင့် - အပေါငျးတို့သဖိုင်ကိုမူရင်းအရည်အသွေးကိုပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိဘဲ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဖိုင်ကို Beamr ဗီဒီယိုအားဖြင့် recompressed ခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ Beamr ရဲ့အထူးဖော်စပ် algorithm ကို၏လမ်းဖြင့်ဖွင့်ထားပါသည်နှင့်လဲလှယ်အတွက်သေးငယ်ပေမယ့်အမြင်အာရုံတူညီဖိုင်ကိုဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယို 50% ဖိုင်အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့တက်နှင့်အတူ, မီဒီယာ optimization ပိုမြန်စီးစတင်များနှင့်လျော့နည်း Re-ကြားခံဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူတစ်ချောမွေ့ streaming များအတွေ့အကြုံကိုပေး, ကွန်ယက်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အရည်အသွေးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ကြည့်ရှုသူအဘို့အ streaming ပြဿနာများဖြေရှင်းရေးကျော်လွန်ပြီး, မီဒီယာ optimization လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းအတွက်ပိုက်ဆံချွေတာ - ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အဆုံးအသုံးပြုသူမှအကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ရက် (CDN) အား - ကကယ်ဖို့ကြာအချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုချလုပ်ကြံသောအားဖြင့်, စတိုးဆိုင်, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုများရှုမြင်ကြသည်။ အဆုံးဖိုင်အရွယ်အစားထက်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်ဖို့ workflow နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာပြောင်းလဲမှုသို့ချောမွေ့စွာ fit မှ - ဒါဟာ Beamr ဗီဒီယို၏အခြေခံကြောင်းဒီအခြေခံတန်ဖိုးကိုအဆိုပြုဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုကို Workflows မိုဃ်းတိမ်ကူးပြောင်းနေကြသည်နှင့်အမျှ Beamr ဗီဒီယို၏ cloud-based ဖြေရှင်းချက်အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်များအတွက်ချောမွေ့စွာလာခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးနှင့်အတူ API ကိုပေါင်းစပ်ဖို့လွယ်ကူသည်။ မိုဃ်းတိမ် SaaS ဗားရှင်းအပြင်, Beamr ဗီဒီယိုဝုဏ်အပေါ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါနဲ့အလွယ်တကူ encoding ကနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ / စာဝှက်စနစ်ခြေလှမ်းများအကြားအများဆုံး Workflows သို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။
Beamr ဗီဒီယို SD ကလျှော့ချရန်အလိုက်ဘစ်နှုန်း (ABR) အစီအစဉ်များနှင့်အတူဿုံအလုပ်လုပ်တယ်အကြောင်းအရာအိုင်ပီကွန်ယက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အင်တာနက်ကို (OTT) ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း, HD အမြင်အာရုံအရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေဘဲနှင့် UHD ဗီဒီယိုကိုပရိုဖိုင်း။ ရရှိလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုမဆိုအထူးဆော့ဗ်ဝဲခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်တီဗီ, ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device တစ်ခုခုအပေါ်ကစားသို့မဟုတ် plug-ins နိုင်အပြည့်အဝစံ-compliant H.264 နှင့် H.265 (HEVC) စီးဖြစ်ကြသည်။
ကိုယ့်ကို Ultra မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျ 5K (UHD) အတွက်အချိန်အတွက် - သင် 4G မှမိုဘိုင်းကွန်ရက်၏မကြာမီတိုးချဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါဤအမှု၏သက်ရောက်မှုကိုပင်ထပ်မံတိုးချဲ့။ ပိုမိုမြန်ဆန်အင်တာနက်ကိုတိုးချဲ့ streaming များအတွက်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းနှင့်မြင့်မားသောစားသုံးသူမျှော်လင့်ဆိုလိုသည်။ နောက်ထပ်ထိုကဲ့သို့သော Beamr ဗီဒီယိုအဖြစ်မီဒီယာ optimization tool များကိုအတူဖိုင်အရွယ်အစားချုံ့ခြင်းအားဖြင့်, streaming န်ဆောင်မှုတိုးမြှင့်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်တကွကြွလာသောမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေဘို့ပိုကောင်းပိုက်ဆံရှာခြင်းနှင့်ရွယ်အားဖွင့်တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ပရိသတ်ကိုမှ 4K UHD ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေ၏လက်လှမ်းမမီတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ် နှင့် resolution ကို။
အစဉ်အလာကို TV ၏မျက်နှာကိုပြောင်းလဲလူတွေကို ပို. ပို. ၎င်းတို့၏လစာတီဗီအထုပ်ကိုချုံ့သို့မဟုတ်ဖြတ်ဖို့ဆက်လက်အဖြစ်ဗီဒီယို streaming များအာကာသသေးငယ်လာပြီ, နှင့်ဖိုင်အရွယ်အစားများမှာမပေးမထားပါ။ ကုန်ကျစရိတ်များ, ဒေတာအသုံးပြုမှုနှင့် bandwidth ကိုစားသုံးမှုစီမံထားခြင်းမရှိသောနှုန်းထားများမှမကြီးထွားဘူးကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာ standard အလေ့အကျင့်အဖြစ်မီဒီယာ optimization ချမှတ်ရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ streaming များရုန်းကန်အစစ်အမှန်သိ - ဗွီဒီယိုချုံ့ရုံတက်ဖမ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
မာကု Donnigan ဖြစ်ပါသည် Vရေခဲ Pဌာနေ အရောင်းနှင့် Market ကဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ at Beamr, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဈဎမီဒီယာ optimization ဖြေရှင်းနည်းများ။ Beamr သူတို့ရဲ့အပြည့်အဝ resolution နဲ့အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်း, H.264 ၏ဘစ်နှုန်းလျော့နည်းစေခြင်းနှင့် HEVC% 50 မှတက်နေဖြင့်စီးသောမူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့သိမှုဆိုင်ရာအာရုံကိုဗီဒီယို Optimizer, ပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုကို interlacing ရှိနေပါသည်လျှော့ချခြင်းအားဖြင့်, Beamr ဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါတယ်ing bandwidth ကိုသတ်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်ပိုမိုမြန်ဆန် downloads, နှင့်ချောမွေ့ streaming များနှင့်အတူအတော်လေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးဗီဒီယို, ။ မိမိအအခန်းကဏ္ဍများတွင်, မာကု Beamr ဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးခဲ့တယ် သစ်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်း ca ကို၏tegory - မီဒီယာ optimization - ဘယ်မှာ Beamr ရဲ့ထူးခြားတဲ့နည်းပညာကိုပိုမိုထိရောက်စွာအရည်အသွေးမြင့်ဓါတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအသစ်သောမီဒီယာကြေညာသူ, စားသုံးသူန်ဆောင်မှုများ, ဆင့်-One စတူဒီယိုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးပလက်ဖောင်းကို enable နိုင်ပါတယ်။
2015 4K Beamr ဗီဒီယို Beamr ရဲ့မီဒီယာ optimization ဖြေရှင်းချက် ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ရက် (CDN) H264 / H265 HD နဲ့ UHD ဗီဒီယိုက profile များကို HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ အင်တာနက်ကို (OTT) isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း SD UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို 2015-09-22
ယခင်: ထုတ်လုပ်ပြီး Dejero Enhanced ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အတူတိုက်ရိုက် + မိုဘိုင်း App ကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်
နောက်တစ်ခု: Jampro တောင်အမေရိကထုတ်လွှင့် Corporacion Medcom ပနားမား, SA နိုင်စွမ်းတိုးမြှင်